Otu esi eme ulo na ulo na pallets - Ikkaro
Inicio >> Ugbo >> Ngwakọta >> Otu esi emekota ulo n'ime pallets
A na-ejide pallet azụ na mgbidi. na n'akụkụ anyị na-ahapụ ha ka ha daa ma anyị tinye ha mkpara na ka oge na-aga site na ibu ma ọ bụ site na ifufe ka ha ghara ịda
N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ osisi nchara na-atụgharị n'ime ala nke na-egbochi usoro ahụ ịtọsa.
Ejiri m ọkara europalet mechie ihu, nwee mkpara n'ime na n'èzí. Ozugbo m juputara na compost m ga-arịgo ma ọ bụ gbanwee akụkụ ihu.
Na esote oyiyi ị pụrụ ịhụ ọzọ atọ mkpara na ọ bụ isiike ezu. O nwekwara uru na enwere ike iwepụ ya ngwa ngwa ma kwaga ebe ọzọ, n'ihi na onye ahọpụtara agaghị abụ nke ikpeazụ.
Ejiri m kaadiboodu kpuchie akụkụ ya iji mee ka ọkụ dịkwuo mma, mana enweghị m ma ọ bụrụ na nke a ga-egbochi ya ịmịkọrọ nke ọma. M ga-achịkwa nchịkọta ahụ ma ọ bụrụ na m hụ na ọ dị mkpa m ga-ewepụ ha.
N'ikpeazụ, ejiriwo m kwaaji kpuchie ogige ahụ iji gbochie ya imebi ma ọ bụrụ na mmiri zoo oke mmiri.
Anyị nwere Esi ntuzi compost i nwekwara ike ihu ozo Ngwakọta jiri drum. Ma ọ bụ lee ụdị ọzọ a anyị kwuru maka ya ogologo oge wuru ya na pallets mana ọfụma karịa. Ọ na-ewe ọtụtụ ọrụ ọ bụ ezie na ọ mara mma karịa
Ngwakọta ochie na-adabere na pallets na osisi
Na nke a, enwere ihe na-ahụkarị nke ọma. E wuru ya site na pallets mana ka ị ga-ahụ site na ịtọsasị, igbutu na isonye slats nke pallets ahụ.
Iji mezuo ihe owuwu ahụ, anyị na-ebuputa pallet ma jiri osisi ịkpụ na-etinye ya na nke ọzọ.
Na eserese ihe owuwu ahụ, mgbe anyị malitere iwu
Detailsfọdụ nkọwa nke compost ewu.
A na-ahapụ ụfọdụ bọọdụ dị n’ihu ka e wee wepụ ha iji zọọ compost.
Dị ka ihe nkwado iji gbochie pallets imeghe, a na-etinye ígwè n'ime ala.
A na-eme otu ihe ahụ na akụkụ nke elu na omenala ejirila ígwè.
N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ nsonaazụ nke ngwakọta anyị na pallets
Ngwa anyị maka compost, ahịhịa ụlọ.
Ederede mbụ site na Onye na-eri a BeeụAnyị na-ahụ ya na nzukọ Info Jardín.
Categories Ngwakọta Tags Pallets na Mee N'onwe Gị Igodo bọtịnụ
Otu esi eme okpokoro kọfị na pallet